Philip Lazarani oo Jowhar jooga iyo wefdigii Qaramada Midoobey oo u kuur galay fatahaada webiga – Radio Daljir
Philip Lazarani oo Jowhar jooga iyo wefdigii Qaramada Midoobey oo u kuur galay fatahaada webiga
Agoosto 20, 2013 4:30 b 0
Jowahr, August 20, 2013 – Magaalada Jowhar ee xaruunta gobolka shabeelaha dhexe waxaa weli ku sugan wefdi ka socda Qaramada Midoobey, kuwaasi oo goor dambe oo shalayto ah yimi Jowhar.
Xubnaha ka socda Qaramada Midoobey ee Jowhar jooga, ?waxaa horkacaya u qaybsanaha Qaramada Midoobey ee dhinaca arimaha bini?adanimo ee UN-ka Mr. ?Philip Lazarani.
Wefdiga Qaramada Midoobey ee Jowhar jooga ayaa waxaa ay maanta shirar la qaateen waxgaradka iyo maamulka degmada Jowhar ee xaruunta gobolka Shabeelaha dhexe, in kastoo aan ila hadda war rasmi ah laga soo saarin kulankaas.
Madaxa arimaha bini?adanimo ee Qaramada Midoobey Philip Lazarani iyo xubnaha la socda ayaa waxay eegeen kharaaha uu geystey fatahaada webiga shabeele, oo saameyn ku yeeshay qaar ka mid ah beerlayda.
Saraakiisha kala gedisan ee ka socda Qaramada Midoobey ee jooga degmada Jowhar ayaa waxaa keentay diyaarad nooca Helicopter ah, safarkoodu wuxuu ku soo beegmayaa maalmo kadib markii ay MSF ka baxday deegano ay ka mid tahay jowhar.
Gen. Cadde ?Ammaanka Puntland halaga shaqeeyo, hadda ma mudna in la kala aamuso? (Dhegeyso)
Dhimashada ay sababto xanuunka duumada oo weli ka jirta dalalka ka hooseeya saxaraha Afrika